China Factory eke nnukwu ogige marble nkume mmiri isi iyi ihe oyiyi na ndị na-emepụta | Ọrụ Atisan
Factory eke nnukwu ogige marble nkume mmiri isi iyi oyiyi
Otu Ngwaahịa ble Marble Carving
:Dị: Isi Mmiri Marble
Ihe ： Natural Marble
Size ized ahaziri
Aka-pịrị onwe eke marble iyi, i nwere ike iji ya mma gị yad.
Nkwado Ntanetị n'ịntanetị
Dechọ Mma ubi
Ogologo Ndụ Ọrụ
Oké Osimiri (ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin)
High Ọkwa polishing
N'ime ụbọchị 30
Marble, Nkume, Granite, Travertine, Sandstone ma ọ bụ dịka ihe achọrọ gị
Sunset red marble, hunanwhite mabul, green granite na na ma ọ bụ ahaziri
Dị ka ndị ahịa chọrọ
Obere ihe osise na ụbọchị 30 na-abụkarị. Nnukwu ihe ọkpụkpụ ga-ewe oge.
Ọ nwere ike ahaziri dị ka gị imewe.
Ofdị ihe akpụrụ akpụ
Igwe ọkụ, Gazebo, ihe osise anụmanụ, ihe osise okpukpe, Akpụrụ akpụ Buddha, Nkume enyemaka, Nkume Nkume, Ọnọdụ ọdụm, Ọnọdụ Elephant Nkume na ihe osise anụmanụ. Stone Water Ball, Stone Flower ite, na-ejegharị Series ọkpụkpụ, Nkume ntabi, Tebụl pịrị apị na oche, Nkume ihe osise, Marble osise na wdg
Chọ mma, n'èzí & ime ụlọ, ubi, square, nka, ogige
Aka-pịrị onwe eke marble iyi, i nwere ike iji ya mma gị yad. Anyị nwere a dịgasị iche iche iche iche mabul osise, dị ka isi iyi, usekwu, planter, kọlụm, akpụrụ akpụ, na na, enyemaka na ect. Ya tumadi maka ubi, Amọraịt, n'okporo ámá, nkwari akụ na azụmahịa na ebe ect
Anyị factory onwem na oge a noo na kere ụrọ nlereanya aghụghọ. Anyị nwere ndị ọkachamara na ndị omenkà, anyị nwere ike ịhazi ọsịse ọ bụla dabere na atụmatụ gị ma ọ bụ ihe ị chọrọ. Anyị dị mma na ọrụ aka ọdịnala, ihe osise ọdịda anyanwụ na ngwaahịa ndị nwere echiche ọdịda anyanwụ.
1.Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji ebufe ngwongwo m?
Maka obere ihe osise, a na-atụ aro ka ịhọrọ nnyefe awara awara .Ọ na-ewekarị 3-7days. Maka ebughi oke ibu ma ọ bụ nnukwu ihe ọkpụkpụ, a na-ebukarị ha site n'oké osimiri. Ọ na-ewekarị ụbọchị iri atọ.
2.Can m mara nkọwa nke usoro m na usoro mmepụta n'oge ọ bụla?
Anyị ga-amalite na-eme ya mgbe ị enen ihe na design.For ọ bụla nzọụkwụ nke mmepụta, nkwakọ, na njem akụkụ, anyị ga-ezitere gị zuru ezuprogress Ozi
3.Etu esi etinye ihe oyiyi?
Azịza: A ga-eziga ihe ọ bụla kpụrụ akpụ na ntuziaka zuru ezu maka ntinye.
4. Olee na-amalite imekọ ihe ọnụ?
A: Anyị ga-akwado nhazi, nha na ihe mbụ, wee kpebie ọnụahịa ahụ, ma mee nkwekọrịta ahụ, wee kwụọ ụgwọ nkwụnye ego ahụ. Anyị ga-amalite ịkpụ ngwaahịa.
Nke gara aga: N'èzí mma ọla kọma mermaid mmiri iyi isi maka ere
Osote: N'èzí ubi agwa roman n'ogige okomoko marble nkume gazebo
Brọze Mmiri Iyi Isi
Ogige Bronze Iyi
Chinese soplaya omenala marble ochie mmiri utari ...
Factory price ọla kọpa ọkpụkpụ ime ụlọ na outd ...
Marble nkume isi iyi gbara nwaanyị ịgba mar ...
Ogige mma nkume bali iyi na ụmụ nwanyị
Garden mma ife nchara ọla iyi nke do ...
Ochie ochie mgbatị nnukwu n'èzí ochie wal ...